महिनावारी हुनुअघि यसरी सफा गर्नुपर्छ ‘प्राइभेट अंग’ : डा. अचला बैद्य « Sajha Page
महिनावारी हुनुअघि यसरी सफा गर्नुपर्छ ‘प्राइभेट अंग’ : डा. अचला बैद्य
काठामाडौं,सरसफाइ सबैका लागि आवश्यक छ। हाम्रो वरपरको वातावरण, खानपानका साथै शारिरीक सरसफाइ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। धेरैले नुहाउनुलाई मात्र सरसफाइ भन्छन्। तर, बाहिरी सफाइसँगै यौनांगको सफाइबारे धेरैले चासो राख्नैनन्।बालिकादेखि वृद्ध महिलासम्मले यौनांग सफाइ गर्ने तरिका र महत्वबारे बुझ्नु जरुरी हुन्छ।
डा. अचला बैद्यको सल्लाह हेर्नुहोस्-